2018 Jeep Wrangler Jiro jiro Halo, Jiro hazavana LED ho an'ny Jeep Wrangler JL
Home > Jeep jiro > Jeep Jiro jiro janoary 2018+
Newest Design 9 santimetatra 2018 Jeep Wrangler Jiro jiro LED DOT SAE Jeep Jiro jiro LED 2018 2019
2018 2019 Jeep Wrangler Jiro jiro Oem taratra 9 santimetatra Jeep Jiro jiro naterak'i Oem Oem
9 inch Led Halo Jeep Jiro joro Rubicon Wrangler Jiro joro aorinan'ny tsena
DOT SAE 9 santimetatra Jeep Wrangler Ny jiro joro jaloalo 2018 dia nitondra jiro Halo ho an'ny Jeep Wrangler JL 2019
Ity jiro ity dia jiro halo 9 santimetatra tariby, tonga miaraka amin'ny hazavao 100w 6500lm avo lenta, 30w 1000lm ambany andry ary halo fotsy 22w DRL. Mety amin'ny taona 2018+ Jeep Wrangler jl, DOT SAE Emark-9 nankatoavina.
Description famaritana Video
Ny jironay dia natao ho tantera-vovoka, tsy harafesina ary tsy tantera-drano. Jiro hazavana taratra mahery mamirapiratra ho an'ny Jeep Wrangler jl, miaraka amin'ny mpampitohy H4 sy adaptatera H13. Famolavolana patanty nataon'i Morsun Technology, mifanaraka amin'ny Jeep Wrangler JL 2018+ tsy ilaina ny fononteny. Volavola tsy manam-paharoa, mahatohitra UV, mahomby amin'ny angovo, mitahiry angovo ary miaro ny tontolo iainana, tsy tantera-drano, tsy misy vovoka, manohitra ny fipoahana. Maharitra sy maharitra mandritra ny adiny 50000 mahery.
famaritana ny Jeep Wrangler Jiro jiro Halo
lafiny Jiro jiro 9 mirefy
Beam avo 100W 6500LM
Loza eo amin'ny trano fonenana Black
Endri-javatra ny Jiro Halo 9 santimetatra ho an'ny Jeep Wrangler JL
9 INCH JL HEADLIGHTS - Famolavolana manokana sahaza Jeep JL (Tsy ho an'ny JK) 2018 2019, fanoloana tonga lafatra ho an'ny Jeep Jiro jiro am-boalohany.
Nohavaozina HEVITRA IZAO MIARAKA MIARAKA - Mazava noho ny jiro voalohany n'ny jiro or jiro hafa mitovy amin'izany, 12000LM High Beam, hazavana 6000LM ambany noho ny jiro LED 9 Inch, tsipika fanapahana maranitra miaraka amin'ny famoahana hazavana avo lenta dia manome antoka fa TSY hanajamba ny mason'ny hafa sady manome ny fahitana mangirana indrindra.
Vita amin'ny fonenana PC sy solomaso polycarbonate, tanjaka lehibe ary maivana. Tsy maharitra ary tsy mahazaka. Trano voaisy tombo-kase mafy, Water68 IP100000, mahatratra XNUMXhrs ny androm-piainana. Manao tsara izy ary manome ny traikefa mitondra fiara tsara indrindra any an'efitra, toetr'andro maizina na zavona orana.
Ao amin'ny jiro OEM JL dia misy visy fanitsiana, azonao ahodina ao anaty fononteny telo misy izy ireo mba hanitsiana ny lamina maivana.
Ny jiro hazavana avo lenta dia ampiasaina mba hahatratrarana angovo ambany ary tsy tantera-drano sy vovoka kokoa.
Mampiasa famolavolana siantifika izay sariaka amin'ny tontolo iainana ary manome toky ny famirapiratana sy ny fihenan'ny fihinanana angovo.
Morsun Led Headlight dia natao hampiasaina hisolo ny tsena fivarotana rehefa avy Jeep Wrangler, ny jiro avo lenta avo lenta dia alao antoka fa Jeep Wrangler vonona amin'ny làlana sy lalan-kely. Ireo jiro naterak'ireny Jeep Wrangler dia natsangana niaraka tamin'ny solomaso projector IP67 tsy simba sy tsy tantera-drano, azo ampiasaina amin'ny tontolo isan-karazany izy ireo.
Mirehareha izahay fa iray amin'ireo mpanamboatra sy mpanondrana avo lenta avo lenta jiro ho an'ny Jeep Wrangler miaraka amin'ny vidiny mirary. Miaraka amin'ny kalitao avo lenta Jeep Wrangler jiro mandeha ny mpanjifanay dia mahazo vokatra avo lenta avo lenta kokoa raha ampitahaina amin'ny iray tany am-boalohany. Ankoatr'izay, ny trano aluminium tsy manam-paharoa dia natao ho tantera-drano, fanoherana ny harafesina ary hafanana haingana hanitarana ny androm-piainan'ny jiro. Ny jironay dia manana antoka 12 volana izay midika fa hanome ny serivisy tsara indrindra izahay mandritra ny vanim-potoana fiantohana mba tsy hanahirana anao hampiasa ny jironao mihitsy.
Demension Jiro jiro 9 mirefy
Trano fonenana Fonenana alimina Diecast
Fa Jeep Wrangler JL 2018-2019
Ity ambany ity ny horonan-tsarimihetsika tarihin-jotra MS-GX9 JL namboarina tsy nisy halo, ho avy tsy ho ela ny horonan-tsary vaovao miaraka amin'ny halo, fa izao dia azonao atao ny mijery ny horonan-tsarimihetsika MS-GX9 tsy misy halo aloha.